पानीमा हिँड्ने कसरी - द्रव विज्ञान प्रयोग
विज्ञानमा प्रयोग गरेर पानीमा हिँड्नुहोस् (वा दौड)
के तपाईंले कहिल्यै पानीमा हिँड्ने प्रयास गर्नुभयो? संभावनाहरू छन्, तपाई असफल भए (र होइन, बर्फ स्केटिङले वास्तवमा गणना गर्दैन)। तपाई किन असफल भयो? तपाईंको घनत्व पानीको भन्दा धेरै अधिक छ, त्यसैले तपाईंले बिर्सनुभयो। यद्यपि, अरू जीवहरू पानीमा हिंड्न सक्छन्। यदि तपाइँ बिट विज्ञान लागू गर्नुहुन्छ भने, तपाईं पनि सक्नुहुन्छ। यो सबै उमेरका बच्चाहरूको लागि एक भयानक विज्ञान प्रोजेक्ट हो।
सामग्री पानीमा हिंड्न
100 बक्स cornstarch
10 गल्ला पानी
सानो प्लास्टिक किडिए पूल (वा ठूलो प्लास्टिकको टब)
बाहिर जाउ। प्राविधिक रूपमा, तपाईंले यो परियोजना तपाइँको बाथटबमा प्रदर्शन गर्न सक्नुहुनेछ, तर त्यहाँ उत्कृष्ट पाइनेहरू हो जुन तपाईं आफ्नो पाइपहरू क्लोग गर्नुहुनेछ। साथै, यो परियोजना गन्दा फास्ट हुन्छ।
पूलमा मकै स्टार्च डाल्नुहोस्।
पानी जोड्नुहोस्। यसलाई मिश्रण गर्नुहोस् र प्रयोग गर्नुहोस् तपाईंको "पानी" संग। यो अनुभवलाई राम्रो तरिकाले अनुभव गर्दछ कि यो चाँडै पढ्नु पर्दछ (खतरा बिना)।
जब तपाईं सकिएमा, तपाईं कुनास्टर्चलाई पूलको तल्लोमा बसोबास गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई स्कूप गर्नुहोस् र यसलाई फेंक गर्नुहोस्। तपाईं पानी संग सबैलाई नली गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं छिटो छिटो पानीमा खानुहुन्छ भने, तपाईं सिङ्क गर्नुहुनेछ, तैपनि यदि तपाईं हिँड्ने वा चलाउनुहुन्छ भने, तपाईं पानीको माथि रहन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं पानीमा हिंड्नु र रोक्नु हुन्छ भने, तपाईं सिङ्क गर्नुहुनेछ। यदि तपाईं आफ्नो खुट्टा पानीबाट यान्क गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ भने, यो अचम्म हुनेछ, तर यदि तपाई यसलाई बिस्तारै बाहिर निकाल्नुहुन्छ भने, तपाई भाग्नु हुनेछ।
के गर्दैछ? तपाईंले अनिवार्य रूपमा घर बनाएको द्रुतता वा ओब्लेकको विशाल पूल बनाउनु भएको छ ।
पानीमा मकई स्टार्चले रोचक गुण देखाउँछ। केहि अवस्थाहरू अन्तर्गत, यो तरलको रूपमा व्यवहार गर्दछ, जबकि अन्य अवस्थामा पनि, यो ठोसको रूपमा कार्य गर्दछ। यदि तपाईं मिश्रण पंच भने, यो एक पर्खाल जस्तै हुनेछ, तैपनि तपाईं आफ्नो हात वा शरीर पानी जस्तै डुब्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाइँ यसलाई निचोड गर्नुहुन्छ भने, यसले दृढता महसुस गर्छ, तैपनि जब तपाईले दबाव जारी गर्नुभयो भने, तरल पदार्थ तपाईका औंलाहरू मार्फत फैल्छ।
एक न्यूटोनियन तरल पदार्थ हो जसले स्थिर चिपचिपा राख्छ। पानी मा मकई स्टार्च एक गैर-न्यूटोनियन तरल पदार्थ हो किनभने यसको चिपचिपापनले दबाव वा आलोचना अनुसार परिवर्तन गर्दछ। जब आप मिश्रण मा दबाव लागू गर्छन, तपाईं चिपचिपा बढाता छ, यो कठिन लग रहेको छ। तल्लो दबाब अन्तर्गत, द्रव कम चिपचिपा छ र अझ अधिक सजिलै प्रवाह गर्दछ। पानी मा मकई स्टार्च एक कतरनी मोटाई तरल पदार्थ या dilatant तरल पदार्थ हो।
एक अर्को साधारण गैर-न्यूटोनियन तरल पदार्थ-केचअप संग विपरीत प्रभाव देखा पर्यो। जब बिग्रिएको बेलाकोचको चिपचिपापन घटाइन्छ, यसैले तपाइँ यसलाई हिलाउन पछि बोट बाहिर बाहिर सजिलै पछाडि राख्न सजिलो छ।
थप मजा विज्ञान प्रोजेक्टहरू
साइन्स जादू ट्रिकहरू तपाईंको मित्रहरूलाई बेवास्ता गर्न
ढिलो बनाउन एक दर्जन तरिकामा
ग्लो-इन-द-डार्क क्रिस्टल स्नोफ्लेक
सजिलो क्रिस्टल बढ्दो व्यञ्जनहरू
स्कूल विज्ञान मेला परियोजना विचार: मेमोरी
पानी पानीमा तरल गोल्ड
कसरी घर मा पिघल एल्युमिनियम क्यान्सर
कूल ड्राई बर्फ परियोजनाहरू
रातो, सेतो र ब्लू इलेक्ट्रोलीज रासायनिक प्रदर्शन
ग्लो पार्टी विचार
मसी कसरी बनाउने
विषय र वस्तु पूर्णता पहिचान गर्ने अभ्यास
Wolfgang Amadeus Mozart को प्रोफाइल
भविष्यलाई सिकाउन ESL पाठ योजना "मा जाँदै" बनाइनेछ "विल"
डेक तार्किक गिरफ्तारी स्ट्याक गर्दै
कसरी 'जुलोज गर्नका लागि आवेदन' (फाइल I-824 फारम) कसरी फाइल गर्नुहोस्
5 मजेदार ब्लगहरू जसले तपाईंको काम गर्ने समस्याहरू बुझ्दछ
अनियमित नम्बर जेनरेटर (आरएनजी) बुझ्दै
बेस्टको जुनो ब्लिज्जर्ड मेमा
ESL कक्षा पाठ्यक्रम कसरी सिर्जना गर्ने
बाल्डविन-वालेस कलेज प्रवेश
किन कार अहिल्यै गर्मीमा गर्मी हुन्छ?
कानुनी अधिकारहरूलाई मतदान गर्ने अधिकार सुरक्षित
वर्तमान-दिवस अंग्रेजी (पीडीई): परिभाषा र उदाहरण
Calypso संगीत 101
चल्ने रेस्टुरेन्ट प्रिन्टबुलहरू गरौं
तपाईंको सेमेलबोटमा सुरक्षित रहनको लागि दिशानिर्देशहरू
अस्थिरता: एक कार्डिनल विजेट
फुटबलमा रेखाबारीको भूमिका
कसरी पत्ता लगाउने सबैभन्दा ठूलो सामान्य कारकहरू
वेस्लेन कलेज जीपीए, एसट र एक्ट डाटा
बाइबिल विश्लेषण: ठूलो आज्ञामा येशू (मर्कूस 12: 28-34)
केन्टकी डर्बी चश्मा एकत्र गर्दै
Avogadro को संख्या को प्रायोगिक निर्धारण
ट्र्याटिक मृत्यु को फ्रेंच कैबर्ट प्यारी एडिथ Piaf